မတ်တတ်ပြေးအရွယ် နဲ့ မူကြိုအရွယ် - Hello Sayarwon - စာမျက်နှာ4အနက်မှ 1
မတ်တတ်ပြေးအရွယ် နဲ့ မူကြိုအရွယ်မှာ ကလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေက အံ့မခန်းပါပဲ။ ကလေးတွေ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကလေးကို ကားထဲမှာ ဘာကြောင့် တစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့သင့်တာလဲ၊၊
ယူအက်စ်မှာ တစ်နှစ်ကို ကလေး ၃၈ယောက်လောက်က ကားထဲမှာ အပူလျှပ်ပြီး သေဆုံးကြရပါတယ်၊၊ အများစုက ကလေးကို ကားထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းထားရာက စတာပါ၊၊ ဒါကြောင့် ယူအက်စ်က ပြည်နယ်တွေ တော်တော်များများနဲ့ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ကလေးကို ကားထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းထားတာကို ဥပဒေနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်၊၊ ဆိုလိုတာက ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေ အထူးသဖြင့် ၆နှစ်အောက်ကလေးတွေကို ကားထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ရှိနေတာကို တစ်ယောက်ယောက်က တွေ့လို့ တိုင်လိုက်ရင် အရေးယူခံရပါတယ်၊၊ ဆိုလိုတာက ကလေးကို ကားထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့တာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းကျောင်းတတ်တဲ့ ကလေးနဲ့ အတူထားတာက အန္တရာယ်များပါတယ်၊၊ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဥပဒေနဲ့ ချုပ်ကိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ကလေးတွေ ကားထဲကို ဘယ်လိုရောက် တမင်ထားခဲ့တာလည်း ရှိသလို မတော်တဆ မေ့ခဲ့တာလည်း ရှိပါတယ်၊၊ ဥပမာ […]
မတ်တတ်ပြေးအရွယ် နဲ့ မူကြိုအရွယ် ကဏ္ဍများကို ပိုမို သိရှိလိုသည်
မတ်တတ်ပြေးအရွယ် နဲ့ မူကြိုအရွယ် နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
ခုခေတ်မှာ ကလေးသေးသေးလေးတွေက အစ လက်ထဲမှာ ဖုန်းသုံး လိုက်၊ ဂိမ်းလေးဆော့လိုက်၊ ကာတွန်းကားလေး ကြည့်လိုက်နဲ့ ငြိမ်နေကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ မိဘတွေကလည်း ငြိမ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး လွှတ်ထားတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သုံးတာက ကလေးမှာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုများစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေအတွက် Screen Timeကို ကန့်သတ်ရမယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာပါပြီ။ Screen Timeဆိုတာ ဖုန်းအပါအဝင် တီဗွီကြည့်တာ၊ တက်ဘလက်သုံးတာ၊ ဂိမ်းဆော့တာ စတာတွေ အကုန်ပါပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးကို ကလေးကို ကြည့်ချင်သလို ကြည့်ဆိုပြီး ဆိုပြီး လွှတ်မထားဘဲ အချိန်တစ်ခု ကန့်သတ်ရမှာပါ။ ကလေးတွေကို ဖုန်းသုံး တာ ဘာကြောင့် ကန့်သတ်ထားတာလဲ။ ၁နှစ်၊ ၂နှစ် စသဖြင့် မူကြိုတက်တဲ့အရွယ်လေးတွေက အရာရာကို စူးစမ်းတဲ့ အရွယ်ပါ။ ဒီလို စူးစမ်းပြီး […]
သင်္ဘောသီးမှာ အာဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေသလို အမျှင်ဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အသီးလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ သင်္ဘောသီးက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်ဆိုတော့ ဘေဘီလေး ကျန်းမာအောင် ကျွေးလို့ရမလား ဆိုတာက မေမေတိုင်း သိချင်နေမယ့် မေးခွန်း ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖြေပေးသွားပါမယ်။ သင်္ဘောသီးမှာ ဘာတွေပါလဲ……. သင်္ဘောသီးမှာ အဆီ နဲ့ ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းပြီး ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝသလို ဘေဘီလေးတို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်မယ့် ဗီတာမင် A၊ ဖောလိတ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဗီတာမင် B အုပ်စုနဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို သင်္ဘောသီး ကျွေးလို့ ရလား……. သင်္ဘောသီးက ဘေဘီလေးကို ကျွေးသင့်တဲ့ သစ်သီး တစ်မျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် ဘေဘီလေးကို […]
လမ်းလျှောက်တတ်စအရွယ် မှာ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ လျင်မြန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ နဲ့ ကြီးထွားလာတာပါ။ ဒီအရွယ်မှာ သင်ယူလေ့လာမှုတွေကို လုပ်ကြပါတယ်။ အရာရာနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ လေ့လာ စူးစမ်းကြတယ်။ ဒါတွေက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်စဉ် တစ်ရပ်ပါ။ ဒီကာလမှာ ကလေးတွေရဲ့ သိမြင်မှုစွမ်းရည်တွေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ၊ ဘာသာစကားစွမ်းရည်တွေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေအကုန် ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တတ်စအရွယ် ကလေးတစ်ယောက် ဖွံ့ဖြိုးမှု လမ်းလျှောက်တတ်စ အရွယ်က ကလေးမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီး ကြုံတွေ့ရတဲ့ အချိန်ပါ။ ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှုတွေ တွေ့ရမလဲဆိုတာကို အတူတူ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ သိမြင်မှု စွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဒါကတေ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ဖွံ့ဖြိုးမှုပါ။ ကလေးက ဗဟုသုတတွေကို စတင် မှတ်သား ရယူနိုင်ပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေ ရယူစုဆောင်းတဲ့ အဆင့်ပါ။ တွေးတောတာ၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ […]
မိဘတိုင်းက သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး တော်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကလေးတွေကို မှန်ကန်တဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အာဟာရတွေဖြည့်တင်းပေးဖို့အပြင် Brain Gym Exercise လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ သင်ကြားပေးဖို့လည်း လိုအပ်မှာပါ။ ဘာတွေလိုအပ်လည်း သေချာဆက်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်။ သားသားမီးမီးတွေ ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေမယ့် အစားအစာများ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့အစားအသောက်တွေကို မှီဝဲစေဖို့ က ပထမလိုအပ်ချက်ပါ။ အစားအစာတိုင်းမှာ အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်နေတာမှန်ပေမယ့် အကျိုးပြုပေးတဲ့ သဘောသဘာဝခြင်းတော့ တူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကို ဖွံ့ဖြိုးအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို မိဘတိုင်းက သိထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သားသားမီးမီးတွေ ရဲ့ ဦးနှောက်ကို အကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါပဲ။ ပင်လယ်ငါး - DHA နဲ့ EPA […]
Dr. Phyo Wai Lynn မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 03/12/2021
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အရပ်ရှည် ခြင်းဟာလည်း လာဘ်တစ်ပါးပါပဲ။ ယောကျ်ားလေးတွေရော၊ မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ အရပ်မြင့်ခြင်းက အခြားသူတွေထက် တစ်ပန်းသာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ မေမေတို့အနေနဲ့ မိမိတို့ကလေး အရပ်ရှည်လာနိုင်ဖို့အတွက် ဂရုစိုက်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ အရပ်မြင့်ခြင်း မမြင့်ခြင်းဟာ မျိုးရိုးဗီဇ ပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် မျိုးရိုးဗီဇ တစ်ခုတည်းနဲ့ သတ်ဆိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအသောက်နဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကလည်း အရပ်မြင့်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအစားအသောက်၊ အနေအထိုင် ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ ခုချက်ချင်း အရပ်မြင့်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးငယ်ဘဝတည်းက သေသေချာချာ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေ ကောင်းမွန်အောင် ဂရုစိုက်ထားမှသာ ဖွံ့ဖြိုးကြီးဖွားတဲ့ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အကျိုးခံစားလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ မိမိကလေးအတွက် အရပ်ရှည်လာစေဖို့ ငယ်ဘဝထဲက ဘယ်လို ကျွေးမွေး၊ပြုစုသင့်တယ် ဆိုတာလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်။ ၁။ နေ့စဉ်အစားအစာတွေကို မျှတအောင် […]
Dr. Thurein Hlaing Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 09/03/2022
လူတိုင်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုမယ်။ ဒါမှ ကျန်းမာမယ်။ ခန္ဓာကိုယ် သွက်လက်ပေါ့ပါးမယ်ဆိုတာ ပြောနေစရာတောင် မလိုအောင်ပါ။ ဒီလိုပါပဲ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ စတင်နေတဲ့ ကလေးတွေမှာလည်း လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပေးတာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ သားသားမီးမီးတို့ နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း ကလေးကို အသက် ၂ နှစ်ကျော် ၃ နှစ်လောက်ကစပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတဲ့ အကျင့်လေးကို မွေးမြူပေးမယ်ဆိုရင် နှလုံး ကျန်းမာစေနိုင်တယ် နှလုံးက ကြွက်သားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ နှလုံး ကြွက်သားတွေဟာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြား ​ကြွက်သားတွေလိုပါပဲ နေ့စဉ် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ လိုပါမယ်။ နှလုံးက ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးလေလေ သန်မာပြီး ခံနိုင်ရည် ပြည့်ဝလေလေပါ။ နှလုံး ကြွက်သားတွေ သန်မာမှုက ကလေးကို နှလုံးရောဂါမဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ခန်း […]
ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်စေတာက ပျော်ရွှင်မှုကိုတင် ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာမှုကိုပါ ဖြစ်စေတာပါ။ ငယ်စဉ်ကစလို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတွေကို လုပ်ပေးတာက ကလေးတစ်ယောက်ကို မိဘတွေအနေနဲ့ လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေး တစ်ခုပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးတာက ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်မလဲ......... ကလေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တတ်တဲ့ အလေ့အထလေး မွေးမြူပေးမယ်ဆိုရင် ကလေးကို နှလုံး ကျန်းမာမယ် သွေးကြောတွေ သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းမယ် အဆုတ်တွေ ကျန်းမာစေမယ် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကျဆင်းစေမယ် ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းညှိပေးနိုင်မယ် အရိုးတွေ သန်မာစေမယ် ဦးနှောက် ကောင်းစွာဖွံဖြိုးမယ် ကင်ဆာ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ် စိတ်ခံစားမှု ကောင်းမယ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမယ် သွေးတိုးရောဂါ ကင်းစေမယ် ခန္ဓာကိုယ် အင်အားပြည့်ဝမယ် ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေမယ် […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 31/01/2022
ကလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ဘဝထဲရောက်လာရင် အစစအရာရာကို ပြင်ဆင်တွေးတောပေးတာက မိဘတိုင်းရဲ့ မေတ္တာပါ။ ဒီလိုပြင်ဆင်မှုမှာ အစားအသောက်ကစလို့ နေရေးထိုင်ရေး ဝတ်စားပြင်ဆင်ပေးမှု အကုန်လုံးပါပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေထဲမှာ လွယ်ကူတာတစ်ခုမှ မပါသလို ဆုံးဖြတ်ရခက် ဝေခွဲရခက်တဲ့ ကိစ္စတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ အခုတစ်ခေါက်လည်း ဒီဝေခွဲရခက်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို အဖြေထုတ်ပေးမယ်နော်။ အဲဒါကတော့ ကလေးတစ်ယောက်ကို အသက် ၂နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင် တခြား အာဟာရမပြည့်ဝတဲ့ သရေစာတွေ လျှောက်ကျွေးမယ့်အစား နို့ဆက်တိုက် လို့ရမလား ဆိုတာပါ။ ကလေးကို မဖြစ်မနေ မိခင်နို့တိုက်ရမယ့် ကာလ ကလေးကို စတင်မွေးဖွားချိန် ကနေစလို့ အသက် ၆ လမပြည့်မချင်း အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက မိခင်နို့ပါ။ မေမေက အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားလေလေ သားသားမီးမီးတို့က အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာထွားကြိုင်းလေလေပါ။ ဒါကြောင့် မွေးစကနေ ၆ လအထိက မေမေ့နို့ချိုကို […]
ကလေးတွေ ဘက်စုံထူးချွန်အောင် ဘယ်လိုကူညီကြမလဲ။
ကလေးတွေ ရဲ့ အနာဂတ်က သင့်အပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိရဲ့လား။ ခုခေတ်က ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ နေရာမှာ အရင်လို ငါ့ကလေးတွေ ကောင်းကောင်းကြီးလာရင် ရပြီ။ ကျန်းမာနေရင် ရပြီဆိုတာနဲ့ ကျေနပ်နေလို့ မရပါတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးသာမကဘဲ စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပါ ဂရုစိုက်ရမယ့် ခေတ်ရောက်နေပါပြီ။ အရင်ကတော့ ကိုယ်ကျန်းမာရင် ပြီးရောဆိုပြီး ကျေနပ်ကြပေမယ့် ခုချိန်မှတော့ သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပါ ဂရုစိုက်ရမှာပါ။ ဒါမှ အဆင်းရော အချင်းပါ ပြည့်စုံတဲ့ လူငယ်တွေ အဖြစ် ကြီးပြင်းလာမှာပါ။ ဒါဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာနေစေဖို့ မိဘတွေ အနေနဲ့ ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်လဲ ဆိုတာ ဆက်ကြည့်ရအောင်။ ကလေးတွေ ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကလေးများရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိက လုပ်ပေးရမှာက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပါ။ […]